Ukuhlanjululwa kobuso emadodeni: ezona ngcebiso kunye neqhinga | Amadoda aQinisekileyo
Nangona kungabonakala kungabalulekanga, amadoda nawo kufuneka ahlambuluke ebusweni. Lelinye lawona manyathelo abalulekileyo emihla ngemihla kwindlela esiqhele ngayo ukuba sifuna ukukhathalela ulusu lwethu. Idermis ibonakaliswe kukungcola, ibhaktiriya evela kubumdaka bendalo kwaye iqala ukuvelisa i-sebum eqokelelana ngaphezulu. Ke ngoko ukucoca ubuso emadodeni kubaluleke kakhulu ukuba sifuna ukukhathalelwa kakuhle kolusu lwethu.
Kweli nqaku siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi ngokucoceka kobuso emadodeni kwaye uyenze njani.
1 Ukucoca ubuso emadodeni
2 Izinto ezinokuqwalaselwa
3 Ukucoca ubuso ngokuchanekileyo emadodeni
3.1 Uhlobo lolusu
Ukuhlanjululwa kobuso emadodeni akuncedi kuphela ekupheliseni yonke into eyingozi kulusu lwethu, kodwa kuyanceda ekuthinteleni ukuqhekeka kunye neebhloko ezixineneyo. Nangona sibucoca ubuso bethu yonke imihla xa sivuka, ayisiyiyo eyona ndlela ichanekileyo yokwenza. Ukuba ulusu luye lwaphuka, buthuntu okanye alufumani manzi ngokwaneleyo Isenokuba yimpazamo yokungabinako ukucoca ubuso. Siza kubona ukuba zeziphi ezona zinto zibalulekileyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo ekucocweni ngokuchanekileyo kobuso.
Ukuhlamba ubuso kufuneka wenze oku kulandelayo:
Hlanganisa ubuso bakho kunye nesepha efanayo esetyenziselwa umzimba okanye izandla.
Yipule isepha phantsi komjelo wamanzi ashushu
Ukuphulula ubuso bakho ngetawuli
Le ndlela yenye yezona zinto zisetyenziselwa ukuhlanjululwa kobuso emadodeni, kwaye nangona ingqineke kakuhle, ayisiyondlela echanekileyo yokunyamekela ulusu lwethu. Isizathu soku kukuba ibha yesepha esiyisebenzisela umzimba ine-alkalinity ephezulu, ngelixa umbala wethu une-asidi encinci. Umahluko we-pH ubalulekile kuba i-alkalinity inokuvelisa iibhaktheriya ezibangela induna, phakathi kwezinye izinto. Ubuncwane bunokwenza ulusu lwethu luzive lomile kwaye lucaphukile.
Isepha zomzimba zinokuhluba ulusu lweoyile yendalo kwaye indlela yokulinganisa le lahleko yeoyile kukuvelisa ioyile ngakumbi. Oku kubangela ukuba ubuso bethu buphele bujongeka bunamafutha kwaye kuya kuba lula ukuvela kwamabala. Kuya kufuneka ndigcine engqondweni ukuba zininzi iintlobo ezahlukeneyo zesikhumba kunye neesepha. Ezinye zisebenza kakuhle kubantu abathile kwaye ezinye azisebenzi. Ukuba womile kwaye urhabaxa okanye uqine emva kokuhlamba ubuso bakho, mhlawumbi usebenzisa isicoci esingalunganga ebusweni bakho.
Inye into onokuyenza kukujonga ukuba imveliso ethile ilungile kuwe. Uvavanyo lolunye olubandakanya ukushiya isixa esincinci sesepha okanye isicoci esikhumbeni kunye nokusivumela ukuba sihlale ithutyana. Ukuba emva kwethutyana ibangela ezinye Uhlobo lobomvu, ukucaphuka okanye ukukhawuleza, imveliso ayilufanelanga uhlobo lolusu lwakho.
Kukho ezinye iindlela zesepha kwaye yeyona nto ibaluleke kakhulu. Ezinye iisepha zinzima kwaye ziqulathe isepha kukuba zinokucaphukisa ulusu lobuso bethu. Ke ngoko, kuyathakazelisa ukusebenzisa izicoci ezizodwa zokucoca ubuso emadodeni. Iisepha eziqhelekileyo ziyomisa i-dermis kwaye zenze ukucheba kungabi lula. Eyona nto iqhelekileyo kukucinga ukuba ukucheba kuyacaphukisa isikhumba kwaye kubangelwa ziincakuba ezisemgangathweni. Nangona kunjalo, yindlela ozihlambulula ngayo oyena nobangela weengxaki zolusu.
Kukho abacoci bobuso okanye amanzi emicellar Ziza zilulwelo okanye ifom yejeli kwaye zenze igwebu ukuphulula ubuso obumanzi kunye nokucoca ubuso obuchanekileyo.
Ukucoca ubuso ngokuchanekileyo emadodeni
Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni kufuneka sisebenzise ezi mveliso endaweni yokuhlamba umzimba. Kwaye kunjalo, ayisusi kuphela ubumdaka kunye namanqatha ongezelelweyo ebusweni, kodwa bakwashiya ubuso bethu benemvakalelo yococeko kwaye hayi ukoma. Oku kufanelekile, ubukhulu becala, kwinto yokuba i-pH yeemveliso iyahambelana nolusu lwethu. Ayenzeki njengesepha yesiko.
Kuyimfuneko ukucacisa oko Amanzi emicellar oyisa iigels okanye amagwebu. Isizathu kukuba amanzi e-micellar ahlala ethambile kakhulu kulusu lwethu kwaye awudingi kuhlanjwa. Kufuneka sikhumbule ukuba amanzi oma kakhulu kwaye xa sisebenzisa amanzi kancinci ukuhlamba ubuso bethu, kokukhona kungangcono. Amanzi eMicellar enza umsebenzi ofanayo, kodwa ngexesha elincinci kakhulu kunye neziphumo ezingcono.
Siza kuthetha nawe malunga neengcebiso zokukhetha isicoci sobuso esihle emadodeni. Ayizizo zonke izicoci ezifanayo okanye ezineempawu ezifanayo. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo izinto ezahlukeneyo zokukhetha esona sicocekileyo:
Zintlanu iintlobo zesikhumba kwaye zezi zilandelayo: ezinamafutha, ezibuthathaka, eziqhelekileyo, ezomileyo nezidibeneyo. Ukuba ulusu olunamafutha, kunokwenzeka ukuba uneepali ezinkulu, ezibonakalayo. Uya kuqaphela ukukhanya okuqaqambileyo. Apha kuya kufuneka ukhethe amanzi emicellar alawula ukuveliswa kwamafutha.
Ukuba unesikhumba esomileyo kufuneka ukhethe isepha ethile kukuba benza umsebenzi olungileyo wokususa ubumdaka kunye nobumdaka. Gcina ukhumbula ukuba ezi iisepha azinakwenza ukuba i-epidermis ilahlekelwe zioyile zendalo. Kule meko, i-aloe vera kunye ne-oatmeal zilungile zokuhambisa amanzi kunye nokuthomalalisa. Kwelinye icala, ukuba unobuso obunobuthathaka obucekeceke ngokucheba okanye ngezinye izinto zokucoca, kuyacetyiswa ukuba usebenzise iimveliso ezinezithako zendalo. Kuphephe zonke ezo mveliso eziqulathe glycolic acid. Ioyile yomnquma kunye nealo vera zigqibelele.
Ukuba ulusu luxubene, oko kuthetha ukuba uya kuba neendawo zobuso ngamanqatha kunye nezinye ezomileyo. Abo bahlambululi banealoe vera, amalahle asebenzayo, kunye neoyile yomnquma kufuneka babe lolona khetho lufanelekileyo. Okokugqibela, ukuba unolusu oluqhelekileyo, awunakukhathazeka kakhulu. Unokukhetha nawaphi na amanzi e-micellar anomgangatho kwaye ayijoliswanga ngqo kumadoda anolusu olunamafutha okanye olomileyo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nokuhlanjwa kobuso emadodeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ukucoca ubuso emadodeni